एण्टिबायोटिक औषधिको साइड इफेक्टले महिलाको जिब्रोमा रौँ पलाएपछि ! - समृद्ध नेपाल
सन्सारमा अनौठा घटना हुने गर्दछन् । यसले सबैलाई अचम्ममा पार्ने गर्दछ । जिब्रोमा रौं पलायो भनेर सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर, यो सत्य हो । अमेरिकामा हालसालै एउटा यस्तो आश्चर्यलाग्दो घटना भएको छ ।भएको के थियो भने, कार दुर्घटनापछि एक महिलाको उपचार जारी थियो । त्यसक्रममा उनलाई एन्टिबायोटिक औषधि से व न गराइयो ।
पछि औषधिकै कारण उनको जिब्रोमा रौं पलाएको छ । यो घटनापछि अहिले सबैजना अचम्ममा परेका छन् यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला युएसए टुडेमा छापिएको खबरअनुसार ५५ वर्षीया महिला कार दुर्घटनामा परेपछि उनका दुवै खुट्टामा घाउ थियो । उपचार सुरु हुनासाथ उनलाई डाक्टरले दुई किसिमका एन्टिबायोटिक औषधि खान दिएका थिए ।
यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला तर, त्यो औषधि खाएको ४ हप्तापछि ती महिलाको जिब्रो बाक्लो हुँदै गयो । बोल्न गाह्रो हुन थाल्यो । त्यसपछि ती महिला डाक्टरकहाँ गएर जाँच गराउँदा उनको जिब्रोमा रौं पलाएको कुरा पत्ता लाग्यो यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
यो बताइएको छ कि, ती महिलाको जिब्रोमा रौं पलाउनुको कारण उनले से व न गरेको एन्टिबायोटिक औषधि हो । सोही औषधिको एलर्जीका कारण उनको जिब्रोमा रौं पलाएको हुनसक्छ । यस्तो अनौठो रोगलाई चिकित्सा भाषामा लिं गु आ भि ला सा नि ग्रा भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा १ देखि १८ मिलिमिटरसम्म लामा रौं जिब्रोमा पलाउन सक्छन् यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
विज्ञानलेपनि अनौठो कुरालाईपनि सम्भव १०१ वर्षमा बच्चा जन्माउने महिला !
सोनिका रोकायले पत्रकार ऋषी धमलालाई दिईन यस्तो चुनौति !
श्रीमानले बिहे गरेर छाडेपछि रातको १२ बजे छोरा छाडेर मर्न हिडेकी !
बाबा खोज्दै २ छोरा पाईलट राजुको घर पुग्दा रोकिएनन् कसैका आँशु !
काठमाडौं जादै गरेको बस दुर्घटना तीनको मृ’त्यु !
त्रिसुलिमा महेन्द्रा बलेरो खस्यो ३ जना युवक झ्यालबाट निस्केर पौडेर बाँचे, गाडी बेपत्ता !
यी चिकित्सक आफैं बिरामी भएर पनि संक्रमितको उपचार गर्दै !
भ्यालेन्टाइन डेमा आफ्नो मृगौला उपहार दिँएर श्रीमतीको जीवन बचाउँदै यी महान श्रीमान !
सलाम छ यी रास्ट्र सेबकहरुलाई ८ घण्टा उत्पादन गर्ने कम्पनीले २४ सै घण्टा उत्पादन गर्छन अक्सिजन
कक्षा १०,११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
चुनाव जितेको खबर पाएपछि विवाह बिचैमा रोकेर बेहुली जव मतगणनास्थलमा पुगीन् !
कोरोना संक्रमित अक्षय कुमार अस्पताल भर्ना !